ဒို့သာသနာ ဒို့ဘာသာ ~ Nge Naing
Friday, January 22, 2010 Nge Naing 32 comments
မိမိဘာသာတရားကို စော်ကားလာသူများအား ပြန်လည် တုံ့ပြန်ရာ၌ ဒီပို့စ် ထဲက ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ အချက်အလက် လေးတွေကို ကျွန်မအခုမှ သိရပြီး တခြားမသိသေးသူများကိုလည်း သိစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ထပ်ဆင့် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မလည်း ကိုတော်ချောနဲ့ စာဖတ်သူများသို့ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ်တခု တင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်မပို့စ်ထဲမှာတော့ အခုဒီပို့စ်ထဲက ဘုရားဟောထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ မပါခဲ့သလို အခုဒီပို့စ်လောက်လည်း အနှစ်သာရ ပြည့်စုံမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မ အလုပ်များနေလို့ အသစ်မတင်နိုင် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သိပ်ကို အနှစ်သာရရှိပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်လိုက်ရပြီး အခုလို ပြန်လည် တင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက် ပို့စ်ပိုင်ရှင် ကိုအောင်ဦး (Dhammaratha) ကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။ မောင်လေး ကိုအောင်ဦးရဲ့ ဓမ္မဒါနကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ပြန်ဖေါ်ပြတဲ့ ပို့စ်တွေပဲ ဆက်တိုက်နီးပါးဖြစ်နေလို့ စာလာဖတ်သူများကိုလည်း တောင်းပန်ထားချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ပြန်ဖေါ်ပြတဲ့ ပို့စ်တွေအားလုံးက ကျွန်မကိုယ်ရေးပို့စ်တွေထက် ပိုကောင်းနေလို့သာ တင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူများကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ ဖတ်ကြည့်ရင် သဘောပေါက်ပြီး နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
သူတော်ကောင်းဓာတ် တရားမြတ် လွှမ်းပတ်ကမ္ဘာ တည်စေသော်… (ကိုအောင်ဦး- Dhammaratha)
(စော်ကားတဲ့ ဘလော့ဂ်နဲ့ ဘလော့ဂါအကြောင်း ကျွန်မတင်တဲ့ ပို့စ်ကို ဤနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။)
Posted in: ဘာသာရေး,မျှဝေခြင်း,နိုးဆော်လွှာ
January 22, 2010 at 3:45 PM Reply
ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလို့ ဖတ်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..မငယ်နိုင်
January 22, 2010 at 6:43 PM Reply
စာတွေ လာဖတ်တယ် မငယ်နိုင်၊ အားပေးလျက်ပါ။
January 22, 2010 at 6:46 PM Reply
ဘုရား လက်ထက် က ဘာရဒွါဇ ပုဏ္ဏား ကြီးဟာ အင်မတန် ရုတ်ရင်း ကြမ်းတမ်း တဲ့ ဖရုသ၀ါစာ စကားလုံးတွေနဲ့ မြတ်စွာဘုရား ဆွမ်းခံ တဲ့ လမ်းတလျှောက် မှာ ဆဲရေးခဲ့ဖူးတယ်။ "ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူ့ အစ်ကို က ဘုရားကို တိုက်ခိုက်စွပ်စွဲမယ်ဆိုပြီး ကြိမ်းဝါးပြီးထွက်သွားတာ ပြန်မရောက်လာပဲ ဘုရားထံမှာ ရဟန်းပါပြုသွားလို့ အခဲမကြေလို့တဲ့။" ဆွမ်းခံလမ်း တလျှောက်လုံး လိုက်ဆဲနေသော်လည်း ဘုရား ကတော့ ဘာမှမဖြစ်သည့်ပုံ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ။ ကြာတော့ ဘာရဒွါဇ ပုဏ္ဏား ကြီး တော်တော် မောလာ ပြီး... ကြိတ်မနိုင် ခဲမရဖြစ်လာကာ ဘုရားရှင်ကို တိုက်ရိုက်သွားမေး ရတော့တယ်။ ဘာလို့ ငြိမ်နေသလဲ... ပြန်မဆဲသလဲပေါ့။
ဘုရားရှင်က အမေးကို အမေးဖြင့် ဖြေတော်မူတယ်တဲ့...
မဖြေချင့်ဖြေချင်ဖြင့်.... “အို ပေးဖူးတာပေါ့”
ဘုရားရှင် စကားကြောင့် ညီဘာရဒွါဇလည်း ဘုရားရှင်ကို ကြည်ညို ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ် သွားတော့သည်။
http://www.myanmaritpros.com က ကူးလာတာပါ။
Thanks for sharing, ma ma nge naing :)
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ အစ်မရေ သူပြုတဲ့ကံ သူထံပြန်သွားလိမ့်မယ် မယူရင် မရဘူးပေါ့..ညီမလေးလဲ ဖတ်ကာစက သွေးတောင်တိုးတယ်...ဒါပေမယ့် သူ့အကုသိုလ်နဲ့သူသွားပါလိမ့်မယ်
January 23, 2010 at 2:11 AM Reply
ကိုယ်တော်ချောဆိုတာ တစ်ခြားသူဟုတ် ရိုးလား....
သူတို့ လုပ်သမျှကိုလူတွေအာရုံမစိုက်နိုင်အောင် လုပ်နေတဲ့အာဏာရူးကြီးတွေ.....
January 23, 2010 at 2:48 AM Reply
January 23, 2010 at 4:08 AM Reply
ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းတုန့်ပြန်ရင် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်စေနိုင်တာကို သတိမူပြီး၊ ဥပေက္ခာပြုထားတာက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
“မော်လဝီနဲ့ ယောဂီ” ဆိုတဲ့ စကားက ခေါင်းထဲ ပြန်ပြန်ရောက်လာနေတယ် မငယ်ရေ...
January 23, 2010 at 9:58 AM Reply
ဒီပို့စ်ကို အများဖတ်ရှုနိုင်အောင် ပြန်လည်တင်ပြတာ ဖြစ်ပြီး လာဖတ်ကြသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သာဓုခေါ်သွားတဲ့ AATO, မဆုမွန်၊ ကိုနှင်းလှိုင်တို့ကို သာဓုပြန်ခေါ်ပါတယ်နော့်။ ဒါပေမယ့် AATO တယောက် သာဓုတော့ ခေါ်ပြီး ဘုရားမကြိုက်တာကို သောက်နေတာလည်း ကို face book မှာ မကြာခစတွေ့နေရလို့ ကောင်းတာကို သာဓုခေါ်သလို မကောင်းတာကို ကိုယ်တိုင်လည်း ရှောင်တတ်အောင် ကြိုးစားဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ အစ်မကြီးယောက် လေသံနဲ့ ပြောလိုက်မယ်နော့်။
ဘုရားလက်ထက်က ဗဟုသုတတွေ မျှဝေပေးသွားတဲ့ TZ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မက အကြောင်းအရာကို သိပေမဲ့ အခု TZ ပြောသလို နာမည်တွေနဲ့ အတိအကျ မသိခဲ့ဘူး။
SDL, ကိုအောင်၊ အဖြူရောင် နတ်သမီး၊ လင်းလက် တို့ရဲ့ အားပေးမှုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မဆုမွန်ရေ ဒီလို တရားနဲ့ ဆင်ခြင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ပုထုစဉ်တွေမို့ ဒေါသနဲ့ မကင်းနိုင်ပေမဲ့ ဒေါသ အလွန်အမင်း ဖြစ်ရင် ဆင်ခြင်တုံတရားတွေ ကင်းမဲ့သွားပြီး ထိန်းလို့ မမှီဖြစ်ရင် ကိုယ်ပဲ နစ်နာပါတယ်။
Anonyous ရေ ဟုတ်ရင်လည်း ဟုတ်နိုင်တယ်၊ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မယ်။ ဒါမျိုးက အထောက်အထား မရှိဘဲနဲ့တော့ တတ်အပ်ပြောလို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ကိုဧရာကို သဘောတူပါတယ်။ မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးနော့်။
ကိုလူထွေး ပြောတာ ကျွန်မသဘောမပေါက်ဘူး။ ကျွန်မ မြန်မာစာ သိပ်ညံ့တယ် အတည့်ပြောတာတောင် တ၀က်ရိပ်မမိတတ်ဘူးလို့ မကြာခဏ ၀န်ခံဖူးတယ်နော့်။
January 23, 2010 at 8:37 PM Reply
အမ ဘလော့ကို ဖတ်ဖြစ်နေကြပါ။
ကိုလူထွေးပြောသွားတဲ့အကြောင်းက မြန်မာပြည်မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်ခင် စစ်ကြိုခေတ်တုန်းက ဗလီဆရာ မောင်ရွှေဖီဆိုသူ ရေးတဲ့ မော်လဝီနဲ့ ယောဂီ စာအုပ်ကြောင့် လူမျိုးရေး အထိကရုန်း ဖြစ်ဘူးတာ ကို ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
January 23, 2010 at 9:30 PM Reply
ခက်တော့ ခက်သားကလားပဲ :(
January 24, 2010 at 5:14 PM Reply
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ ဘုန်းကြီးတွေကို ပြစ်မှားခဲ့တဲ့
သန်းရွှေတပည့် ဘာသာခြားစစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့လက်ချက် သန်းရွှေအကြိုက် ဆက်လက်မိုက်ရိုင်းပြနေတဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးဘလော့၈ါတွေရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားတဲ့ဘလော့တခု ပေါ်ထွက်လာတာလို့ ထင်မြင်မိတယ်ဗျာ
Ashin Kumara says:
January 25, 2010 at 5:42 AM Reply
မည်သည့်စကားက ဆဲတာလဲ..မည်သည့်စကားက ပုတ်ခတ်စော်ကားတာလဲ..ဆိုတာ .. သိနားလည်ဖို့ တော့လိုအပ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့ ဒဖနေးရှင်းရှိပါတယ်။ လိုအပ်ရင် နောင်အကျယ်ရေး ပို့စ်တင်ပါ့မယ်။
ဆဲရေးစကားကို ပုတ်ခတ်စော်ကား တယ်လို့ နှလုံးသွင်းရမယ်..
ပုတ်ခတ်စော်ကား တာကို ဆဲရေးတယ် လို့ မှတ်ယူ ပြီး လစ်လျူရှုရမယ်..လို့
ဘုရားရှင်ရဲ့ မိန့်မှာ ညွှန်ကြားချက်.
အထောက်အထား တစ်စုံတရာ.. ဗုဒ္ဓစာပေများမှာ ယနေ့ထိတော့.. မတွေ့ဖူး. မဖတ်ဖူးသေးပါ။
( စာပေ မနှံ့စပ်လို့လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. အထောက်အထားတစ်စုံတရာ တွေ့ရင်..ဖေါ်ပြပေးစေလိုပါတယ်)
အဆိပ်ဖြေဆေးဖေါ်ဖို့ အားအစွမ်းမရှိဘူး ဆိုရင်လဲ.. မရှိဘူးလို့ပဲ သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။
မိမိအယူအဆများရှေးတန်တင် ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင် နေကြရင် ထေရ၀ါဒ အဆုံးအမ များမှ ချော်ကျသွားဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။
ဥပမာ... မြတ်ဘုရားက.. စော်ကားလာသူကို တုန့်ပြန်ဖြေရှင်း နည်းပေးလမ်းပြတော်မူတယ်။ အဆိပ်မှိုင်းမိသူများကို ဖြေဆေးပေးတော်မူတယ်။
မိမိ တို့က ခန္တီ တရားကို ..ငြိမ်ခံခြင်း ဟု ဘာသာပြန်ကာ...ဘာသာခြားတို့စော်ကားမှု ကို လစ်လျူရှု ထားတယ်။
အတွေးအကြံ.အမြင်မှန် အလျှင်အမြန် ရကြပါစေသော်..
January 25, 2010 at 6:25 PM Reply
Khet Myint Myint ရေ ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစ်က ငယ်ငယ်က သမိုင်းကို ရှစ်တန်းအထိပဲ သင်ဖူးပြီး နောက်ပိုင်းလည်း ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာဖူးတဲ့အထဲမှာ မပါလို့ မသိလိုက်ဘူး။
ကိုအိုးဝေ ပြောသလိုဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ် အတိအကျတော့ ပြောလို့မရပါဘူး။
ဆရာတော် အရှင်ကုမာရကို တပည့်တော်မ သီးသန့် ဆွေးနွေးမယ်နော့်။
January 26, 2010 at 12:46 AM Reply
ကိုလူချောဆိုတဲ့လူရဲ့ အရေးအသားတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ စိတ်ထဲမှာတောင် ထည့်ထားသင့်တဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ထဲထည့်ထားလောက်အောင်လည်း သူပြောတဲ့စကားတွေက အဆင့်အတန်းမရှိပါဘူး။ ဒါကိုသူနဲ့လိုက်တုပြီး လိုက်ပြောနေမယ်ဆိုရင် သူ့အဆင့်နဲ့ တန်းတူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ ဘုရားအဆုံးမကို သိဖို့လိုတယ်.. ဘုရားရှင်ရဲ့ အောင်ခြင်းရှစ်ပါးကို ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်တော်မူပုံတွေကို ကြည့်ရှုရင်သိနိုင်ပါတယ်..။ အမျိုးမျိုး စွပ်စွဲပုတ်ခတ်မှုတွေကို ဘယ်လိုအနိုင်ယူပြသွားလဲဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာဝင်မှန်တဲ့သူတိုင်း နားလည်နိုင်ပါတယ်..။ ဒါကိုမှ ဘုရားဟောနဲ့ လွဲပြီး လုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ် မဟုတ်ဖူးလို့ပဲ ပြောလိုက်ပါရစေ..။ ကိုယ့်အဆင့်ကိုသိပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမနဲ့အညီ နေထိုင်ကျင့်ကြံနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်အစ်မရေ..။ သာသနာကို အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးပြီး စောင့်ထိန်းတတ်ကြပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြုပါတယ်.. အစ်မလင့်လေးလည်း တခါထဲယူသွားပါတယ်..။ ဆက်လက်အားပေးနေပါတယ်အစ်မရေ..။ ဘယ်သူကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ ဘုရားမကဲ့ရဲ့ဖို့ပဲ လိုပါတယ်..။
January 26, 2010 at 3:45 AM Reply
January 26, 2010 at 4:32 AM Reply
သာသနာအကျိုး နိုင်သလောက်သယ်ပိုးနေတာ ကို များစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ ဘာသာကို ချစ်တဲ့ စိတ်.ကိုယ့်ဘာသာကို ကာကွယ်လိုတဲ့စိတ် အပြည့် ရှိကြတယ်..ဆိုတာကို လဲ ချီးကျူး ရပါတယ်။
အောင်ဦး စိုက်မှာ..ကော်မန်း ပေးသူ နဲတဲ့ အတွက် တိုတို ပဲ ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ ငယ် နိုင် ရဲ့ စိုက်ကတော့.. ကော်မင်း ရေးသူ များတဲ့အတွက် ပို မို ထင်ရှားစေ ဖို့ ပိုမို အသေးစိတ် တဲ့ ကော်မန်း ကို ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။
နားမလည်ဘူး ဆိုတဲ့ အတွက် ထပ်ဆင့် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
ကိုယ်ရေးမဲ့ စာက အများရေးတဲ့ကော်မန်း နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာ သိပါရဲ့။ အများနဲ့ဆန့်ကျင်နေပါလျက် ဘာလို့ရေးရသလဲ ဆိုတော့.......
ကိုးကား တဲ့ ဘုရားဟော က.. " မဟုတ်သည်ကို မဟုတ်သည့် အတိုင်း သင်တို့ ဖြေရှင်းရမည်” (ဒီ၊ မြန်၊ ၁၊ ၁၁)။ .ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားအလိုတော်က .. သင်တို့ ဖြေရှင်းရမယ်။ (.......မဟုတ်ရင် မဟုတ်ဘူးလို့ ဖြေရှင်းပါ)။
အဲဒါက ပါဠိတော် ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ချုပ်ကြီးရဲ့ အမိန့်လိုပါဘဲ။
ဖြေရှင်းရမယ်..ဆိုတဲ့ ပါဠိတော်ကို ကိုးကားလျက် နဲ့ ဥပေက္ခာပြု ခြင်းဖြင့် ဆက်ဆံကြပါလို့ အလေးအနက် အသိပေးပါရစေ။ (ဥပေက္ခာပြု ခြင်းဖြင့် ဆက်ဆံကြပါလို့ အလေးအနက် အသိပေးပါရစေ)။
ဒီစကားက ကိုးကားလိုက်တဲ့ ပါဠိတော် နဲ့ အလိုက်သင့်အလျားသင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပါရဲ့လား။ ပါဠိတော်အားလျော်စွာ .. ရေးထားတဲ့ စာ .ဟုတ်ပါသလား..မဟုတ်ဘူးလား..ဆိုတာ ..သေချာဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ဝေဖန်ကြည့်ပါ။ အဖြေထုတ်ကြည့်ပါ။
ကိုးကားတာက ဖြေရှင်းပါ.လို့ပဲပါတယ်။ (ဘာကြောင့် ညာကြောင့်.. ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်.ချွင်းချက် မပါဘူး)။
ဒါကို အောင်ဦး အဖြေထုတ်လိုက်တာက..... ဥပေက္ခာပြု (လစ်လျူရှု) ပါ။
ဖြေရှင်းပါ (ဘုရားစကား ). နှင့် ဥပေက္ခာပြုပါ .(အောင်ဦးစကား ) တို့သည် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိသလား... အဓိပ်ပါယ်အတူတူ ဟုတ်သလား..မဟုတ်ဘူးလား။
ဖြေရှင်းပါ နဲ့ ဥပေက္ခာပြုပါ..ဆိုတဲ့စကားနှစ်ရပ် အီကွေးရှင်းချ...ထပ်တူညီ အဓိပ္ပါယ် ထွက်တယ်...လို့ အများ နားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်..ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ. ဦးဇင်းရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုပါ.(၁၀ တန်း. မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးမှတ်မရခဲ့ပါ)။
အဲဒီစကား နှစ်ရပ် ရှေ့နောက် ဆန့်ကျင်တယ်.ကွဲလွဲ နေတယ်.လို့ အများနားလည်ကြပါတယ်.ဆိုရင် ..
ထေရ၀ါဒ ရဲ့ ခိုင်မာမှု စံ သတ်မှတ်ချက်အရ...ဘယ်ဟာ က ပိုပြီး အားကောင်း ခိုင်မာသလဲ ဆိုတာ ဆန်းစစ်ရပါတယ်။ (ပါဠိတော်နှစ်ရပ် ဖြစ်နေရင် ကျမ်းညှိတတ် ရပါတယ်.... ကျမ်းကြည့်မခက် .ကျမ်းညှိ ခက် ဆိုတဲ့စကား ရှိပါသေးတယ်)။
အယူဝါဒ နှစ်ခု တိုက်ဆိုင်လာပီ ဆိုရင်... ၁. သုတ္တ.၂.သုတ္တနုလောမ.၃. အာစရိယ၀ါဒ.. ၄.အတ္တနော မတိ .. ဖြစ်မဖြစ် ညှိ နိုင်း စစ်ဆေးရပါတယ်. (ပရိယတ္တိ စာသင်ခဲ့ရသူများ နားလည်ပါတယ်.)။
သုတ္တ ဆိုတာက ပါဠိတော်...ခိုင်မာမှု အားအကောင်းဆုံး.ပါ. (ဒီအကြောင်း http://www.ashinkumara.com/2010/01/blog-post_23.html မှာ အကျယ်ရေးထားပါတယ်)။
အောင်ဦးရဲ့ စကား က .သာမန် အရပ်သား တစ်ယောက်ရဲ့စကား .။
ဒီနှစ်ခု ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်. . ထေရ၀ါဒစံ အရ.. အားကောင်းခိုင်မာ တဲ့ ပါဠိတော်ကို ပဲ ယူရပါတယ်။ အောင်ဦးစကား ကို ပယ်ရပါတယ်. (အဌကထာ.ဋီကာ.ဘယ်ဆရာတော်..ညာဆရာတော်..စတဲ့ စကားဖြစ်ပစေဦးတော့.. ပယ်ရမယ်)။
ကျနော့် ပိုစ့်မှာ ပါတဲ့ အောက်ပါစာကြောင်း ကိုပဲ အရှင်ကုမာရက ထောက်ပြတာလို့ ယူဆပါတယ်။
<<< မဟုတ်တာကို မဟုတ်ကြောင်း၊ မမှန်တာကို မမှန်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြသော်လည်း ကောင်းစွာ ခံယူခြင်း မရှိသူများကို ဥပေက္ခာပြု ခြင်းဖြင့် ဆက်ဆံကြပါလို့ အလေးအနက် အသိပေးပါရစေ…။ >>>
အဲဒီ စာကြောင်းရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို နားလည်မှု လွဲသွားသလားပဲ။ ကျနော် ရေးတဲ့ အထဲမှာ ငြိမ်ခံရမယ်လို့ မဖြေရှင်းရဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဖြေရှင်းပြောပြသော်လည်း တဖက်က လက်မခံကြတဲ့ အတွက် ဥပေက္ခာပြုခြင်းဖြင့် ဆက်ဆံပါလို့ သုံးခြင်းပါ။
ကျနော်တို့ စာေ၇းနေသူတွေ အတွက် သူတပါး အသိမှား အမှတ်မှား ဖြစ်စေမယ့် အသုံတွေ မရေးမိဖို့ အထူးသတိထားရပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါး အမှားတွေ မှတ်သွားရင် ရေးသူမှာ အပြစ်ရှိပါတယ်။ ကျနော်လည်း သတိထားပြီး စေတနာ ရှေ့ရှု ရေးထားတာပါ။ ဆရာတော်များ၊ သီလရှင်များကို ဖတ်ရှုပြီးမှ အခုလို ပိုစ့်တင်ရတာပါ။
January 26, 2010 at 11:01 AM Reply
မောင်ကောင်း၊ ဆရာတော် အရှင်ကမာရနဲ့ တခြားဦးဇင်းတပါး၊ မောင်လေးကိုအောင်ဦးတို့ရဲ့ မှတ်ချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆရာတော် အရှင်ကုမာရ အခုလို ဝေါဟာရတွေကို တိတိကျကျ ထောက်ပြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ လက်ခံလို့လည်း ရပါတယ် ဘုရား။ စောစောက မှတ်ချက်မှာ အရှင်ဘုရား ပြောထားတာက ထောက်ပြတာထက် မဆိုင်တာတွေက ပိုများနေလို့ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်း မဟုတ်လို့ ထောက်ပြတဲ့ အရှင်ဘုရား ကိုယ်တိုင်က ထောက်ပြတဲ့ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းတွေမှာ ဒေါသထွက်တဲ့သူတွေကိုပဲ အားပေးရမလိုလို၊ တပည့်တော်မတို့ကပဲ ဘာသာရေး အသင်းခွဲ လုပ်နေသလိုလို ပြောထားတာမျိုး ဖြစ်နေလို့ Reply ပြန်လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ အခု ဒုတိယ မှတ်ချက်ကြောင့် ရှင်းသွားပါပြီ။ မောင်လေး ကိုအောင်ဦးကလည်း သူဆိုလိုတဲ့အချက်နဲ့ နားလည်မှုလွဲနိုင်တဲ့အချက်ကို လာပြောပြသွားခဲ့ပြီ၊ တပည့်တော်မလည်း အတော်အသင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဖြစ်လို့ ဆိုလိုတာကို သဘောပေါက်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်ဘုရား။ စော်ကားသူကို သွားပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရှင်းလင်း ပြသနေသူတွေကို တပည့်တော်မတို့က မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ပြောနေခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရှင်းပြတာတွေ ကိုယ်တော်ချော ခေါင်းထဲဝင်မှာ မဟုတ်ပေမဲ့ သူ့ဆီမှာ စာသွားဖတ်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ အကျိုးရှိပါတယ် ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် ဘာမှ သွားမရှင်းပြလိုပေမဲ့ ရိုင်းစိုင်းစွာ ဆဲဆိုခြင်းမရှိပဲ ဘုရားဟောတွေကို အမှန်တိုင်း သွားရှင်းပြနေသူတွေကို တပည့်တော်မတို့က ကန့်ကွက်တာ မဟုတ်ဘဲ တပည့်တော်မတို့ ဆိုလိုတဲ့ အဓိကအချက်က ဒေါသဖြစ်ကြသူတွေကိုဘဲ ဒေါသနဲ့ မတုံ့ပြန်ဖို့ ပြောတာသာ ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
စော်ကားမှုအပေါ် တုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာ ခံစားရတဲ့ Emotion ကို ထိန်းသိမ်းတာချင်းသာ မတူပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အားလုံးက စော်ကားမှုကို မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ကြတာချင်းတော့ အတူတူပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးမှုမှာ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုံးတွေကြောင့် နားလည်မှု လွဲနိုင်တယ်ဆိုတာကို အလေးအနက်ထားပြီး မိမိဘာသာ သာသနာ အကျိုးအတွက် သတိရှိရှိနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ အဖြေရလို့ ဆရာတော် အရှင်ကုမာရနဲ့ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
January 26, 2010 at 11:40 PM Reply
ရဟန်းဝိနည်းကို ပြင်ဆင်ချင်နေတဲ့ ရဟန်းတု ရဟန်းယောင်တွေ ကြောင့်သာ သာသနာပျက်စီးရမှာပါ။
အဲဒီလို ရဟန်းတွေ တနေ့တခြား များပြားလာတာကိုက ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် အရှက်ခွဲခံရမှာ ပိုပို များလာလေပါပဲ။
ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ ပြောပြောလုပ်လုပ် တကယ့် ဘုရားသားတော် အစစ်အမှန်ဆိုရင် ပရိယတ်စာပေတကယ်လေ့လာနေသူဆိုရင် အခုလို ပေါက်ကရ အတွေးအခေါ်မျိုးကို စိတ်ကူးထဲတောင်မထည့်ဝံ့ကြပါဘူး......
January 27, 2010 at 3:51 AM Reply
မကလျာလား မောင်ကလျာ လား ဘာပြောတာတောင် ဘုန်းကြီးကခင်များကိုဘာလုပ်လို့လဲ.
January 27, 2010 at 5:45 AM Reply
အပေါ်က anonymous ပြောတဲ့ စကားက မိုက်ရိုင်းလွန်းပါတယ်။ ဟိုအရှင်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်တော့ ဦးဇင်း ဒီလို ဆိုးဆိုးရွားရွား မရေးသင့်ဘူးလို့ပဲ သတိပေးပါရစေ။
သိလို့လားခပ်ပေါပေါ စကားလုံးတွေနဲ့ ရဟန်းတွေကိုမ
သဘောပေါက်အောင်ဖက်ပြီးမှ ကွန်မင့်ပေးပါဗျ အခုဟာ
ခင်များတို့ ကွန်မင့်ဝင်ပေးနေတာ အံ့သြစရာကောင်း
တိုက်တွန်းပါရစေ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ဇေတာရာပါ
မိမိနဲ့ သဘောထားမတူသူတွေကို မှတ်ချက် ပြန်ပေးရာမှာလွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲပိုင်ခွင့်ကို တန်ဖိုးရှိရှိ အသုံးချပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်း ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ပြန်လည်မေးမြန်း ပြောဆို၊ ဆွေးနွေးတာမျိုးပဲ အားလုံးကို ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ကလျာ၊ Anonmous, ကျော်လေး၊ Zay Tar Yar တို့ကို စာလာဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ရေးရင်တော့ ခုနက ပြောထားတဲ့ အတိုင်းပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ဘုရားဟောတဲ့ တရားတွေကို အဆက်ဆက် သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ သံဃာတော်ဆိုတာသာ မရှိခဲ့ရင် အခုလက်ရှိ ကျွန်မတို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အန္ဒိယမှာ အာသောကမင်း ကျဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း ဘယ်လိုမှ အမွေအနစ် အဖြစ် လက်ဆက်ကမ်း ကျန်ခဲ့နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ သံဃာတော်တွေက အသက်နဲ့လဲပြီး သယ်လာပေးခဲ့လို့သာ ဘုရားရဲ့တရားတွေကို ကျွန်မတို့ လက်ထက်မှာ အခုကြားနာခွင့်ရခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မတို့အတွက် သံဃာတော်တွေရဲ့ ကျေးဇူးဟာ ကြီးမားလှပါတယ်။ ဒီကျေးဇူးတွေကြောင့် ပုထုစဉ် သံဃာတော်တွေမှာ အမှားရှိရင်တောင်မှ စေတနာအမှားအဖြစ် နားလည်ပြီး သာသနာ အဓွန့်ရှည်ရေးအတွက် သံဃာနဲ့တကာ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းပဲ့ကိုင်ပြီး သွားရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ နားလည်လက်ခံထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရင် မှားနေတာကို ထောက်ပြတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မှန်နေတာကိုပဲ ထောက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ထဲမှာ သာသနာအတွက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အားလုံး နှလုံးသွင်းနိုင်ရင် တဦးကိုတဦး မထိခိုက်စေပဲ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စကားကို စေတနာနဲ့ ပြောနိုင် ဆွေးနွေးနိုင် လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
anonymous ဘယ်သူလဲ ဆိုတာရေးသူပဲသိပါလိမ့်မယ်..ကျော်လေး။
ဓမ္မရသ ဆိုက်မှာ ပေးထားတဲ့ ကော်မန်းကို လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ပီး ဒီမှာ ဖေါ်ပြပါရစေ။
ဆိုက်ပိုင်ရှင် .ငယ်နိုင် ခွင့်ပြုပေးပါဦး.။
ကလျာ သဘောမကျ နိုင် ဖြစ်နေမယ် ထင်တဲ့ စာ ကို လိုရင်း လေး ကော်ပီ ကူးဖေါ်ပြပါ့မယ်။
သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ(ဓမ္မပဒ) ... ဆိုတဲ့စကားသည် အပြောသာမဟုတ် လက်တွေ့ကျင့်သုံး နိုင်ကြလျက် ပစ္စုပ္ပန် သံသရာကြီးပွါးရေး ဆထက်တိုးစုပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ကြမည် ဟု ယူဆမိပါကြောင်း.......။
ဒါပေမဲ့. နစ ခုဒ္ဒ မာစရေ ကိဉ္စိ ယေန ၀ိညူ ပရေ ဥပ၀ ဒေယျုံ.. လို့ ဆိုထားတော့...
ကလျာ .တစ်ယောက်. အမှန် ၀ိညူ ဖြစ်ပါစေ.လို့ ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်။
January 28, 2010 at 7:22 PM Reply
ဘာမှ ၀င်မပြောဘူးလို့ သဘောထားခဲ့ပေမယ့်
မကလျာလား မောင်ကလျာ လား ဘာပြောတာတောင် ဘုန်းကြီးကခင်များကိုဘာလုပ်လို့လဲ.))))
အဲဒီစကားကို သတ္တိရှိရှိ ဖြောင်ပြောရဲလား
ကိုယ့်နာမည်တောင် ကိုယ်မဖော်ရဲဘဲနဲ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း
စကားကို ဓမ္မကို ဆွေးနွေးနေသူတွေကြား ၀င်ပြောနေတာ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်ပါတယ်
ကလျာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူး
သူပြောတဲ့ စကားကိုတော့ လုံးဝ ထောက်ခံတယ်
((ရဟန်းဝိနည်းကို ပြင်ဆင်ချင်နေတဲ့ ရဟန်းတု ရဟန်းယောင်တွေ ကြောင့်သာ သာသနာပျက်စီးရမှာပါ။
အဲဒီလို ရဟန်းတွေ တနေ့တခြား များပြားလာတာကိုက ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် အရှက်ခွဲခံရမှာ ပိုပို များလာလေပါပဲ။))))
ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ သိချင်ရင် ပြောပြလို့ရသေးတယ်
လူတွေကို လိင်လည်ဟောပြောပြီး ဘုရားတရားကို
ဖျက်ဆီးနေတဲ့ အဓမ္မ၀ါဒ ဘုန်းကြီးတွေ ပေါ်နေတာ
ဘာသာခြားက စော်ကားတာထက် အသားထဲက လောက်ထွက်ပြီး ကိုယ့်သာသနာထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံပြီး အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုး ဗုဒ္ဓကို စော်ကားတာလောက် ခံပျင်းစရာကောင်းတာ
မင်းသဘောပေါက်ထား ရဟန်းတု ရဟန်းယောင်တွေ
အင်အားကြီးလာရင် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် အရှက်ခွဲခံရမှာ
အဲဒီလို မဖြစ်အောင် အဲဒီ ရဟန်းတု ရဟန်းယောင်
တွေကို အရင်ဆုံး တိုက်ခိုက်ချေမူန်းပစ်ရမယ်
January 29, 2010 at 8:47 PM Reply
အော်ရီဂျင်နယ် ကွန်မန့်လေးတွေ သွားဖတ်ကြဗျာ ...
ဒီပို့စ်လေးကိုလဲ ဖတ်ကြည့်ကြဦး ... ဓမ္မရသကွန်မန့်ထဲမှာတော့ ပါပြီးပြီ ... မတွေ့မိမှာစိုးလို့ ...
ပြီးရင် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့် ...
နောက်တခု အဲဒီမှာ ရေးနေတဲ့ ကလျာဆိုတာလဲ ဘယ်သူဆိုတာ သူ့အရေးအသားလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ကြဦးပေါ့ ... http://dhammaguardian.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html ဒီမှာ သိမ်းထားတာ တချို့ရှိတယ် ... ဓမ္မရသကွန်မန့်တွေမှာလဲ သူရေးထားတာ တချို့ရှိတယ် ... သူ့ဘာသာရေး knowledge နဲ့ ၊ သူ့အရေးအသားတွေကိုကြည့် ... ပြီးရင် သူဘာကြောင့် အဲလိုရေးလဲဆိုတာ ထင်မြင်ယူဆချက်လေးလဲ ပေးကြဦးပေါ့ ... ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ ကျနော် ဘာမှ မပြောဘူးနော် ... ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကြပေါ့ ...
ပြီးတော့ နောက်တဖက်က ရေးသားသူကိုလဲ ဘာကြောင့် အဲလိုရေးရလဲဆိုတာ သေချာမဆန်းစစ်ပဲ ရေးတာမျိုးကတော့ ဘယ်တရားပါ့မလဲလေ ... နှစ်ဖက်စလုံးကို သေချာလေ့လာဦးမှပေါ့ ... မဟုတ်ဖူးလား ...